Dhacdooyinka soo socda - Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > Events > Dhacdooyinka CIRC
Upcoming Events ›Dhacdooyinka CIRC
view Sida	 ListMonth
Luulyo 22 @ 5:30 pm - 8: 30 pm
Beerta Beerta ee Rio Grande, 6935 CO-17
Alamosa, CO 81101 United States + Map Google
2022 waxay xusaysaa sannad-guuradii 20-aad ee Isbahaysiga Xuquuqda Soogalootiga Colorado. 20kii sano ee la soo dhaafay, CIRC waxa ay u adeegaysay sidii cod iyo dhaqdhaqaaq midaysan oo gobolka oo dhan ah si ay u difaacdo una horumariso cadaalada soogalootiga. Waxaan gudbinay sharciyo aan tiro lahayn, kordhinay xubinimadeena, waxaanan hogaaminay waxqabadyo abaabulan oo badan. Si loo dabaaldego, waxaan ku yeelan doonaa dhacdooyin gobol kasta oo Colorado ah. Nagu soo biir Bandhigga Khayraadka Bulshada ee Gobolka Koonfur ee Alamosa! Kaalay wax ka baro agabka soogalootiga ee laga heli karo beeshaada. Waxaa jiri doona…
Kulliyadda Mountain ee Colorado, 3000 Waddada 114
2022 waxa ay xusaysaa sanadguuradii 20aad ee Isbahaysiga Xuquuqda Soogalootiga Colorado. 20kii sano ee la soo dhaafay, CIRC waxa ay u adeegaysay sidii cod iyo dhaqdhaqaaq midaysan oo gobolka oo dhan ah si ay u difaacdo una horumariso cadaalada soogalootiga. Waxaan gudbinay sharciyo aan tiro lahayn, kordhinay xubinimadeena, waxaanan hogaaminay waxqabadyo abaabulan oo badan. Si loo dabaaldego, waxaan ku yeelan doonaa dhacdooyin gobol kasta oo Colorado ah. Nagu soo biir Dabaaldegga Buurteena ee Glenwood Springs! Munaasabadda ayaa ka dhici doonta Xarunta Colorado Mountain College Spring Valley Campus ee…
Sebtembar 16 @ 7: 00 pm - 11: 00 pm
Laxanka, 1209 N College Ave
Fort Collins, CO 80524 United States + Map Google
2022 waxa ay xusaysaa sanadguuradii 20aad ee Isbahaysiga Xuquuqda Soogalootiga Colorado. 20kii sano ee la soo dhaafay, CIRC waxa ay u adeegaysay sidii cod iyo dhaqdhaqaaq midaysan oo gobolka oo dhan ah si ay u difaacdo una horumariso cadaalada soogalootiga. Waxaan gudbinay sharciyo aan tiro lahayn, kordhinay xubinimadeena, waxaanan hogaaminay waxqabadyo abaabulan oo badan. Si loo dabaaldego, waxaan ku yeelan doonaa dhacdooyin gobol kasta oo Colorado ah. Nagu soo biir xaflada gobolka waqooyi anagoo qoob ka ciyaareyno habeenka fog! Munaasabadda ayaa dhici doonta Jimcaha, Sebtember 16-keeda laga bilaabo 7-11 galabnimo…